COVID-19 eny am-bava-ady: antsafa niarahana tamin’ny Vokovoko Mena ao Ekoatora · Global Voices teny Malagasy
Misedra fanamby maro ny rantsana ao Ekoatora manampy mpifindra monina.
Voadika ny 15 Janoary 2021 16:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Ελληνικά, Français, Español
Tarika Vokovoko Mena ekoatôriàna, mizara fanampiana noho ny maha-olombelona ho an'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana. Sary an'ny Vokovoko Mena, nahazoana alàlana.
Tathiana Moreno, tale mpitantana ireo faritra iankinan'ny aina ao amin'ny Vokovoko Mena Ekoatôriàna, manara-maso isanandro ireo ezaka hitazonana hatrany ny fahasalaman'ny vahoaka ekoatôriàna.
Araka ireo tarehimarika ofisialy tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra, nisy 33.582 ireo tranga voamarina ary 2.799 ireo matin'ny COVID-19 tao Ekoatora. Tao Ekoatora, ireo mpiasan'ny fahasalamana no nanome ny 20% tamin'ireo maty. Na izany aza, toy ny tany amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, sarotra inoana ireo tarehimarika naroson'ny fanjakàna noho ny tsy fahombiazany sy ny tsy fisian'ny mangarahara.
Talohan'ny nirotsahany ho isan'ny Vokovoko Mena Ekoatôriàna, niasa tao amin'ny PNUD (fandaharanasan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fampandrosoana) i Moreno, sy tao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamàna. Nandritra ny resaka an-telefaona nifanaovany tamin'ny Global Voices, fijery mivantana ny asa fanampiana amin'ny maha-olona ataony no nomeny, asa avy any anatin'ny tena fon'ilay valanaretina tao Amerika Latina.
Fanamarihana: Nafohezina sy nasiana fanovàna mba hazavazava kokoa ilay resaka.
Gabriela Mesones Rojo (GMR): Ahoana ny fomba fitantanan'ny Vokovoko Mena ekoatôriàna nandritra ny valanaretina?
Tathiana Moreno (TM): Ny fanovàna voalohany nataonay dia ny tsy fiarahana miasa intsony amin'ireo mpirotsaka antsitrapo, na eo aza ny fitomboan'ny rotoroton'asa. Amin'izao fotoana izao izahay dia mandray an-tànana ireo tranga voamarina sy fahafatesana voalaza fa misy fifandraisana amin'ny COVID-19, mifanaraka amin’ireo fepetra iraisampirenena momba ny fikarakaràna am-panajàna ireo olona namoy ny ainy. Natombokay ihany koa ny antokon-draharaha fakàna sy fanomezana rà any an-tokantrano satria nakatona noho ny fihibohana ireo banky fitahirizana rà, izay fepetra tsy nampiharina afa-tsy tao Ekoatora irery ihany. Ny Vokovoko Mena ekoatôriàna no mamatsy ny 80% tamin'ny rà nanerana ny firenena.
Mikarakara ihany koa izahay ny fandaharanasa fanadiovana rano sy fidiovana, indrindra fa manodidina an'i Santo Domingo, Santa Elena, Guayas, sy Cañar, toerana izay iadiana ihany koa amin'ny olana ateraky ny aretina “dengue” ankoatry ny COVID-19. Ao Guayaquil, faritra nahitàna ny fiparitahana be indrindra dia ny toerana onenan'ireo mpanankarena, izay betsaka no niverina avy nivahiny tany ivelany; saingy any amin'ireo faritra onenan'ireo tena mahantra indrindra no misy ny taham-pahafatesana avo be nateraky ny COVID-19. Ny dikan'izany dia misy fifandraisana amin'ny tsy fahafahana mahazo ny tolotra fototra – indrindra fa ny rano.
Tamin'ity herinandro ity izahay nanomboka ihany koa ny tetikasa iray fametrahana ivontoerana iray fitsaboana ny aretin'ny taovampisefoana hahafahana mikarakara ireo olona manana olana amin'ny fisefoana, ho entina manamaivana ireo hôpitaly. Ao Quito izahay no manomboka azy io, ary raha mizotra tsara dia hitarinay manerana ny firenena.
Manome tohana ara-tsaina sy fitsaboana amin'ny alàlan'ny telefaona ihany koa izahay ho an'ireo mpiasanay, ary manamafy ny fanohananay ireo olona mpifindra monina any amina toerampialofana miisa 22. Niaraka nametraka ihany koa izahay fampianarana ety anaty tambajotra, momba ireo lohahevitra toy ny fisorohana sy fifehezana ny aretina, ny fiadanampo miatrika ny COVID-19, ary ny fisorohana mandritra ny fotoana fihibohana. Izany rehetra izany dia mitarika fandaminana ara-pitaovana goavana be sy fandaniana midangana tokoa.
Tarika Vokovoko Mena ekoatôriàna. Sary an'ny Vokovoko Mena, nahazoana alàlana.
GMR: Raha ny tatitra milaza tsy fahampiana eo amin'ny sehatra nasiônaly, ahoana no fomba nandrindrànareo ny fahazoana ireo fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana?
TM: Lasa tena sarotra be ny mahita izay ilaina. Mampiasa fitaovam-piaraovana tokoa ny fiara mpitatitra marary, saingy tena fanamby faran'izay goavana ny hahazoana izany. Talohan'ny nahatongavan'ny viriosy teto Ekoatora, $3.95 USD ny boatina maska N95. Amin'izao fotoana izao, $4 USD ny maska singany iray. $64 USD ny fitafy feno natao ho fiarovana amin'ny otrikaretina (akanjo, kiraro, langilangy, solomaso, fonon-tànana). Midika izany fa ny hazakazaka fikarakaràna tsirairay ataonay, tafiditra amin'izany ny mpamily fiara mpitatitra marary, ireo mpanampy mpitsabo, ny mpanampy, dia $200 raha kely indrindra, izay ariana anaty fitoeram-pako isaky ny avy ampiasaina. Tsy misy fandraisana anjaran'ny fanjakana io satria mandray an-tànana ny famatsianmbola ny fiofànana sy ny fampitaovana ao aminy ny Vokovoko Mena
GMR: Toy ny ahoana izany miasa any amina toeram-pialokalofan'ny mpifindra monina?
TM: Nandritra ny herintaona sy tapany, nanana fandaharanasa ho an'ireo mpifindra monina ny Vokovoko Mena, ary manana fifandraisana akaiky amin'ny vondrompiarahamonin'ny mpifindra monina izahay. Nanokatra anjara tetibola iray ny Vokovoko Mena hanangonany ireo fanomezana ho an'ny mpifindra monina tsy manana hialofana, ireo marefo, tsy manana tambajotra mpanohana, ary mivelona amin'ny fanaovana asa tsy anaty rafitra. Tamin'ny alàlan'ny lalàna, namoaka didimpitondràna ny fanjakana hanakanana ny olona tsy hampandoa vola amin'ny tolotra ataony na handroahana ny olona manana olana amin'ny hofantrano nandritra ny faharetan'ny fotoanan'ny hamehana, saingy asehon'ireo rakitra voangona fa mbola marobe ireo mpifindra monina sy Ekoatôriana no niharan'izany. Betsaka ny olona nandeha an-tongotra nody nankany Venezoalà noho io antony io.
GMR: Manana tarehimarika ve ianareo hoe firy ny olona mikasa ny hody any amin'ny firenena niaviany?
TM: Manodidina ny 40 hatramin'ny 700 eo isanandro ireo olona vaovao manandrana mandeha an-tongotra voarakitra ao anaty rejisitray. Tsy tarehimarika ofisialy ireo saingy rakitra izay atsanganay amin'ny alàlan'ireo vovonana miaraka amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ireo rafitra hafa misahana ny mpifindra monina. Ny vondrompiarahamonin'ireo Venezoeliàna no tena ahitàna be an'io, satria ry zareo no andiana mpifindra monina farany indrindra tonga tao Ekoatora. Ireo olona nonina latsaky ny herintaona tao amin'ny firenena no resahantsika eto, ka amin'izany dia marefo ny fifamatorany amin'ny vondrona sy ireo rafitra mpanohana. Mety manana tantara efa hatrany amin'ny 10 na 12 taona tao Ekoatora ny vahoaka Kôlômbiàna, ary nitombo be ny vondrompiarahamonin'ireo Haitiàna taorian'ilay horohorontany tamin'ny 2010, araka izany dia efa namàka tsara tao amin'ny firenena ry zareo. Kanefa, mahatsapa ho marefo sy feno tahotra ilay vondrompiarahamonina Venezoeliàna vao haingana. Betsaka no miteny hoe mahatsapa tahotra ny ho faty ary dorana any amin'ny firenena hafa noho ny azy nefa tsy fantatry ny fianakaviany akory.
Tarika Vokovoko Mena ekoatôriàna mizara fanampiana amin'ny maha-olona ho an'ireo vondromppiarahamonina monina any amin'ireo faritra be mponina ao amin'ny firenena. Sary an'ny Vokovoko Mena, nahazoana alàlana.
GMR: Manao ahoana ny fahatsapan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny am-bava ady mikarakara ny marary mandritra io fotoana io?
TM: Ao amin'ny faritanin'i Guayas, iray amin'ireo faritra tena voadona mafy, misy olona 53 voa, ny iray maty, ary ny iray tena voa mafy dia an-dalam-pahasitranana izao. Betsaka no natahotra sao hamindra amin'ny havany, ka dia nametraka faritra fitokana-monina izahay ho azy ireny. Tena henjana sy sarobahana io toedraharaha io. Toedraharaha mahakasika anay rehetra io, mpiaramiasa aminay sy namanay anatin'ny tolona ireny.
Manerana ny firenena, efatra no isan'ireo mpiasa maty noho ny valanaretina COVID-19. Ny olona farany namoy ny ainy dia tsy tany ambava ady akory, fa nitantana ny fitsaboana ampitaina amin'ny alàlan'ny telefaona avy any an-tranony. Saingy efa tafakatra avo be loatra ny fiparitahan'ny aretina ka dia tratra ihany izy.
io toedraharaha io dia nahafahanay niverina nisaina ny fiainana, ny anjara asanay, ny asa amin'ny maha-sampandraharaha anay. Ao amin'ny Vokovoko Mena, mino ny maha-olombelona izahay, amin'ny filàna manamaivana ny fangirifirian'ny olombelona amin'ny vanimpotoana sy toejavatra rehetra. Asehon'ireny fotoana ireny anay ny lanjan'ny Vokovoko Mena, sy ny hoe mbola mitoetra mandrakariva ho marina ny fotokevitra ijoroanay.